Boky – Blaogin'i Voniary
Rediredy tokoa angamba ny an-dRasamy fa amin’izao fiainana efa sarotra izao ny olona no tadiaviny tsy ho kivy, hisikina herim-po sy hanana fikirizana . Rediredy angaha izany hanandratra ny teny Malagasy manoloana ny fiteny sadasada sy fiteny frantsay eto amintsika. Ary mbola toa hijanona rediredy fotsiny ihany ny fanakianana ireo zava-tsy mety eo amin’ny fiarahamonina,... Lire la Suite →
Môssieur Njo – Ranjasoa Publishing 2016 Andro inona isika androany ? Andro inona androany ? Farandro letsy androany a! Izany ve dia tsy fantatr’ialahy? P112 Famintinana: Nitsingevaeva teo anelanelan’ny nofy sy ny tena izy Rabe tatoato izay. Nisafotofoto be ihany ny tao an-dohany ka andro roa sisa no tadidiny: ilay alatsinainy, izy nihisatra teo am-pandriana ary ilay... Lire la Suite →
21 février 2017	 4